Yuri Online Shop ကို အသုံးပွု၍ ယုံကွညျစိတျခစြှာဖွငျ့ မှာယူနိုငျပါသညျ ဆိုငျလိပျစာမြား ဖုံးနံပါတျမြား ကို လညျးစာမကျြနှာတှငျ သခြောဖျေါပွထားပါသညျ၊
ဝနျထမျးဦးရေ 48 ဦး ရှိပါသညျ ရနျကုနျမွိုတှငျး ပစ်စညျးရောကျမှ ငှခေစြေနဈဖွငျ့ ကိုယျတိုငျ Yuri အမှတျတံဆိပျကားမြားဖွငျ့ပို့ဆောငျပေးပါသဖွငျ့ စိတျခယြုံကွညျစှာမှာယူနိုငျပါသညျ.
မညျသညျ့ ပစ်စညျးကို မဆို ပုံကွညျ့ပွီး ဖုံးဖွငျ့ လညျးဝယျယူနိုငျပါသညျ ။
01-3583700, 09-9841-88999 ,09-9861-66999,
နယျမှဖွဈပါက ဘဏျသို့ငှလှေဲပို့ပေးရမညျဖွဈပွီး Bank ထဲသို့ ငှဝေငျပွီးကွောငျး ဘဏျမှ အတညျပွုခကျြ ရယူပွိးပါက ထိုနတှေ့ငျပငျ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီမကြျောပါက နတှေ့ငျးခငျြး ရနျကုနျကား ဂိတျသို့ ပို့ဆောငျပေးပါမညျ ဘဏျငှဝေငျအတညျပွုခကျြ ရယူခြိနျသညျ ၁၂ နာရီနောကျပိုငျးဖွဈပါက နောကျတဈနေ့ တှငျ ကားဂိတျသို့ ပို့ဆောငျ ပေးပါမညျ ၊ မိမိ နရေပျကားဂိတျတှငျပို့ခ ကသြငျ့ငှပေေးခရြှေေးယူယုံသာဖွဈပါသညျ ၊
နယျမှပစ်စညျးမှာယူပွိးပါက ပို့ပေးရမညျ့ ကားဂိတျဖုံးနံပါတျ တို့ကို ကြှနျပျတို့မှ ဖုံးဖွငျ့ ဆကျသှယျ မေးမွနျးမညျဖွဈပါသဖွငျ့ ဆကျသှယျရလှယျကူမညျ့ဖုံးနံပါတျမြားကို သခြောဖျေါပွပေးပါရနျ မတ်ေတာရပျခံပါသညျ။
order အမှာ အတှကျ လိပျစာ Form ဖွညျ့ရာတှငျ Form ကို Blank ထား၍မရပါ Postal Code နရောတှငျ 01 ဟုဖွညျ့ပါ
Yuri Online Shop နှင့် Yuri Online App ကို အသုံးပြု၍ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် မှာယူနိုင်ပါသည် ဆိုင်လိပ်စာများ ဖုံးနံပါတ်များ ကို လည်းစာမျက်နှာတွ င်သေချာေ ဖ်ါပြထားပါသည်၊
၀န်ထမ်းဦးရေ 48 ဦး ရှိပါသည် ရန်ကုန်မြိုတွင်း ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေချေစနစ်ဖြင့် ကိုယ်တိုင် Yuri အမှတ်တံဆိပ်ကားများဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးပါသဖြင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာမှာယူနိုင်ပါသည်.
၀ယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများအားလုံးကို အရည်အသွေး မှန်ကန်ကြောင်း အာမခံပါသည်
မည်သည့် ပစ္စည်းကို မဆို ပုံကြည့်ပြီး ဖုံးဖြင့် လည်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ။
09-4444-55849, 09-4444-55847 ,09-4444-55843
မှာယူပြိး ပါက ဖုံးဖြင့် ကျွန်တေ်ာတို့ဖက် မှ အတည်ပြုချက်ရယူပါမည်။ ဖုံးလက်ခံဖြေကြားပေးရန်လိုပါသည်
အတည်ပြုချက်ရယူပြိးပါ က ရန်ကုန်မြို့တွင်း သို့ 36 နာရီအတွင်း ပို့ ဆောင်ပေးပါမည် (ပိတ်ရက် ကြားခံပါက ရုံးဖွင့်၇က်မှသာပို့ဆောင်ပေးပါမည်) ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ပို့ဆောင်ခ7 ကီလို ထိ ၂၅၀၀ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။
နယ်မှဖြစ်ပါက ဘဏ်သို့ငွေလွဲပို့ ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး Bank ထဲသို့ ငွေဝင်ပြီးကြောင်း ဘဏ်မှ အတည်ပြုချက် ရယူပြိးပါက နေ့ လည် ၁၂ နာရီမကျော်ပါက နေ့ တွင်းချင်း ရန်ကုန်ကား ဂိတ်သို့ ပို့ ဆောင်ပေးပါမည် ၁၂ နာရီနောက်ပိုင်းဖြစ်ပါက နောက်တစ်နေ့ တွင် ကားဂိတ်သို့ ပို့ဆောင် ပေးပါမည် ၊
နယ်မှာမှာယူပါက ကျသင့်ငွေတန်ဖိုးနှင့်ဘဏ်ငွလွှေဲခ ပေါင်း၍ ဘဏ်မှပို့ပေးရပါမည်။ပစ္စည်းပို့ခ ကို ကားဂိတ်တွင် မိမိဘာသာ ရွေးယူစဉ် ပေးချေရပါမည်။
နယ်မှပစ္စည်းမှာယူပြိးပါက ပို့ပေးရမည့် ကားဂိတ်ဖုံးနံပါတ် တို့ကို ကျွန်ပ်တို့မှ ဖုံးဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ဆက်သွယ်ရလွယ်ကူမည့်ဖုံးနံပါတ်များကို သေချာဖေါ်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
order အမှာ အတွက် လိပ်စာ Form ဖြည့်ရာတွင် Form ကို Blank ထား၍မရပါ Postal Code နေရာတွင် 01 ဟုဖြည့်ပါ
မရှင်းလင်း သည့်အချက်များ စုံစမ်း လိုသည်များ အတွက် အောက်ပါ ဖုံးနံပါတ်သို့ အားမနာတမ်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
မနက် 9Am To6PM (တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရ ရုံး ပိတ်ရက် များ ဆိုင်ပိတ်ပါသည်)
နယ်မှမှာယူသော ပစ္စည်းများ ကို ဘဏ် မှ ငွေလွှဲ ခြင်းသာခွင့်ပြုပါသည် မှာယူသူများ မှားယွင်း ခြင်း မဖြစ် စေရန်ကာကွယ် သည့် အနေဖြင့် တစ်ခြား ငွေလွှဲ ဖြင့် လွှဲ ခြင်းများကို လုံးဝလက်မခံပါကြောင်း အသိပေး အပ်ပါသည် ။
ဖုံး 09-9861-66999,01-3583700, 09-841-88999